Astaamaha maskaxda: neurochemicals, xasuuso marka hore dhunkashada | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Asaasiga Maskaxda Neurochemicals
Xusuusnow suufka ugu horeeya ee farxad leh?
Meel kasta oo kulanki jaceylka koowaad ah uu dhaco, fursadaha ayaad ku xasuusataa wax kasta oo ku saabsan ... meesha, urta, dhadhanka, waxa aad xidhnayd, dareenka dibnaha, miyuusigga iyo dareenka isdhexgalka iyo rajada mustaqbalka. Waxay u badan tahay inay dhacdo markaad ahayd dhalinyaro. Waa wax xiiso leh in laga hadlo arintaas, laakiin ma ogtahay in ay ahayd xannuunada maskaxda ee maskaxdaada taas oo bixisay khibrada?
Kama saari doonto qarsoodiga jacaylka si uu u ogaado tan, laakiin waxay naga caawin doontaa inaan fahanno sababta dareemada iyo waayo-aragnimada qaar ay aad u xoogan yihiin oo ay sameeyaan xasuusiyooyin sii socda.
Markaa maxaa dhacay? Marka ugu horeysa ee muuqaalka sheyga rabitaankeena, wadnahayagu si dhaqso ah ayuu u garaacaa, waxaana laga yaabaa inaanu 'gilgilnay' badanaa ama bilawnay. Taasina waxay ahayd waddankayagii kacsanaa adrenaline. Fikradda raaxada iyo abaalmarinta noo keentay inaan la galno qof cusub, ayaa waxaa sababay qashin-nukro-neurochemical dopamine. (Xiriirkan fiidiyowga waa wareysi lala yeeshay khabiirada soo ogaaday rabitaanka iyo jiidashada xiisaha ee dhexdhexaadinta dopamine.) Dopamine waxay ka caawisaa inay soo xasuusato xusuusta shucuureed, gaar ahaan haddii aan ku fakarno ama ka hadlo. Dhalinyartu waxay soo saaraan dopamine badan marka loo eego dadka qaangaarka ah ama carruurta oo aad ugu nugul.
Dareenka farxada leh ee dhunkashada iyo isu islaanta ayaa ka iman lahaa daadkii Opioids ee xarun abaalmarin ah oo ku faafin lahaa uun dopamine ka dib. Mar labaad, sida dopamine, dhalinyaradu waxay soo saaraan daawoyin dheeraad ah oo ka dhan ah dadka waaweyn ama carruurta.
Dareenka isku dhejinta iyo kalsoonida soo socota marka aynu u oggolaano in qofku uu u dhawaado ama uu is qabsado oxytocin. Haddii aad dareentay farxad iyo nuxurka fikradda ah inaad heshay saaxiibka suurtogalka ah, waxa laga yaabaa inay sababtay heerarka korodhka ah serotonin maskaxda. Waxay ku shaqaysaa marka aan dareemo mawduuc ama dareen ka mid ah jagooyinka bulshada, sida helitaanka qof jecel, fursad u ah inuu noqdo lamaane. Madax xanuun ama xanuunka oo dhan ayaa la waayay endorfin waxay ku dhufatay maskaxda xanuunka.
Waxaad xusuusi doontaa dhacdadan shucuurta ah si aad u wanaagsan, sababtoo ah, maskaxdaadii hore, waxay ahayd dhacdo isbedelaysa nolosha. Waxay ku dhejin doontaa wadada xasuusta adag ee maskaxdaada, adigoo xasuusinaya dareenka wanaagsan oo kugu dhiirigelinaya inaad mar kale ku celiso dabeecada.
Haddii dareenkaaga uu soo laabtay oo uu doonayay taariikh, wadnahaagu wuxuu ka boodi lahaa mar kale garaacid marxaladda farxadda leh ee neurokimalka ee farxada leh iyo rajadaada mustaqbalka farxad leh.
Hase yeeshe, isagu ama iyadu dhab ahaantii xiiseynin kulan kale, waxa dhici karta inaad soo saartay cortisol, diiqadda neurokimka ayaa sidoo kale lala xiriiriyaa niyad-jabka. Ka fekerida aanad joojineynin habka manka ee ku saabsan qofka ama xaalad, waxa adiga / ay sameeyeen ama aadan sameynin, waxaa laga yaabaa inay sababtay saameynta heerarka hoose ee serotonin. Tani waxaa laga helaa xanuunka qasabka ah ee qasabka ah. Ka caroodo niyadjabinta yoolkayagu ama rabitaankeenu wuxuu horseedi karaa naafanimada caafimaadka maskaxda haddii aynaan baran in aan si ka duwan uga fikirno xaaladda.
Dopamin badan oo aan lahayn serotonin ku filan, neurotransmitters ee maskaxda ee "raaxada" iyo "farxad" jidadka siday u kala horreeyaan, saameyn ku yeeshaan niyadda. Xusuusnow, si kastaba ha ahaatee, raaxada iyo farxada ma aha wax la mid ah. Dopamine waa "abaalmarinta" neurotransmitter oo sheega miyirkayaga: "Tani waxay dareemeysaa wanaag, waxaan rabaa in ka badan." Hase yeeshee calaamadaha dopamine aad u badan ayaa keena cabitaanka. Serotonin waa "niyad-jabka" neurotransmitter-ka oo u sheega maskaxda: "Tani waxay dareensantahay wanaag. Waan ku filanahay. Ma rabo ama uma baahnid wax kale. "Si kastaba ha ahaatee, serotonin aad u yar wuxuu keenaa niyadjab. Fikrad ahaan, labadaba waa inay ahaadaan kuwa ugu wanaagsan. Dopamine wuxuu hoos u dhigaa serotonin. Diiqada daba dheeraatay labadoodaba labadaba.
Barashada inay ahaato mid nuxur leh oo aan raadineynin hirgelinta joogtada ah ee dhiirigelinta waa cashar muhiim ah oo lagu barto. Sidaa daraadeed waa barashada sida loo maareeyo fikradaha, khiyaaliga iyo dareenka.
Buug ay Loretta Breuning ku magacawday "Caadooyinka Qosolka ah ee Mucaarad Qaadasho leh"Iyo iyada website soo bandhigaan madadaalo xiiso leh oo ku saabsan farxad iyo shucuur niyolokamiin.
<< Neuroplasticity-ka Nidaamka Abaalmarinta >>